Dzidza Geology: Zvinyorwa, zvido uye tsananguro dzakadzama | Network Meteorology
Muchikamu chino ticha taura nezvenyaya dzakasiyana siyana pamusoro geology yepasi pasi. Tichadzidza maitiro akasiyana e geological anoitika mukati mepasi rePasi nekunze. Pasi penyika pane zvinoitwa nemajeniki akasiyana siyana atichadzidza. Uye zvakare, iwe unozogona kuziva mhando dzematombo aripo, maumbirwo aakaitwa uye nekuzadzikiswa kwakazara.
Chokwadi iwe unonamira nezvako zvinyorwa kubva kuInstitute / yunivhesiti uye iwe unoda zvishoma kusunda kuti ujekese kusahadzika kwauinako. Muzvinyorwa zvatinoburitsa isu tinogara tichiedza kutsanangura zvinhu nenzira dzakanakisa uye nenzira yakajeka, yakapusa uye inovaraidza. Aya ndiwo marongedzerwo eruzivo mukati uye unogona kudzidza zvakawanda nezve yedu nyika uye geology yayo.
Geology Iyo sainzi iri mukutarisira kwekudzidza kwete chete mabviro, asiwo shanduko yePasi, chimiro chemukati nekunze uye neese maitiro anoitwa.. Iyo inesainzi inonakidza kwazvo nekuti iwe unogona kunyatso kuziva iyo nyika maunogara uye maumbirwo ayo. Iwe unogona zvakare kudzidza pamusoro pezvinhu zvausingakwanise kuona nemaziso ako, senge chimiro chese chemukati chePasi uye nekuumbwa kwayo.
Muzvinyorwa zvese zviri muchikamu ichi unofanirwa kufunga nezvazvo nguva dzese nguva yegeological. Nenzira iyi iwe unogona kuve neruzivo rwuri nani rwenguva iyo inotora kuti nyika yedu iite ichienzaniswa nehuremu hwehupenyu hwemunhu.
Ndinovimba munogona kunakirwa imwe neimwe yenyaya dzatinoburitsa muchikamu chino uye kuti tinogona kukubatsirai sezvazvinogona kuti geology isainzi inonakidza.
chii chiri gwenga
kubudikidza ChiGerman Portillo inoita Mavhiki e2 .
Pakati penzvimbo dzakaoma zvikuru dzezvipenyu uye urombo mune zvipenyu zvakasiyana-siyana panyika tine magwenga. Kune akawanda marudzi emagwenga uye…
Kusiyana pakati pemagma nelava
Sezvo kune huwandu hukuru hwemakomo anoputika munyika, zvinokwanisika kuti rimwe rawo richatevera…
Makomo anoputika ane ngozi zvikuru munyika
kubudikidza ChiGerman Portillo inoita Mavhiki e3 .
Makomo anoputika zvinhu zvakasikwa zvinoitika kana magma anobva mukati meNyika asvika pamusoro….
nzizi dzine simba zvikuru pasi rose
kubudikidza ChiGerman Portillo inoita 1 mwedzi .
Nzizi dzagara dziri musimboti wehupenyu hwekukura kwevanhu, sezvinoratidzwa nenyaya yekuti...
kubudikidza ChiGerman Portillo inoita 2 mwedzi .
Tese tinoona makomo munzvimbo dzedu zuva nezuva. Zvisinei, vamwe vanhu havazivi kuti gomo chii...
Nei kuGranada kuine kudengenyeka kwenyika kwakawanda kudaro?
Granada ipurovhinzi uko kudengenyeka kwakawanda kunoitika nguva zhinji. Kunyangwe zvisiri kudengenyeka kwenyika kwakanyanya uye kune ngozi,…
kuti makungwa akaumbwa sei
Munhau yose, vanhu vave vachishamisika kuti nyanza dzakaumbwa sei. Pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX, zvaitendwa kuti…
Chii chinonzi archipelago
Panyika yedu pane akasiyana geological maumbirwo ane akasiyana hunhu zvichienderana nekwaakabva, morphology, rudzi rwevhu, nezvimwe ...
chii chinonzi lava
Makomo anoputika mamwe emhando dzinonakidza dze geological, kunyangwe kuputika kwawo dzimwe nguva kuchigona kuisa…
Metamorphic matombo iboka rematombo akaumbwa nekuvapo kwezvimwe zvinhu mukati...
kubudikidza ChiGerman Portillo inoita 4 mwedzi .
Nekuda kwemabviro ayo echiNahuatl, zita raro rinoreva "gomo rinoputa", nekuda kwekukwirira kwaro ndiro repamusoro-soro muMexico mushure ...